“घरमा कोही मानिस आँउदा घरको इज्जत जान्छ भनेर मलाई लुकाइन्थ्यो” –रमेश प्रसाई -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – Ap Nepal
करोडौं नेपाली जनता’ले रुचाएका प्रखर वक्ता रमेश प्रसा’ईको जन्म नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा बि.सं. २०५० सालमा भएको हो । उनका बुवा आ’मा दुवै जना शिक्षण पेशामा संलग्न छन् । त्यसैले त होला उनी सानै देखि चेतन’सिल थिए । दुवै आँखा नभएका उनी जन्म’जात नै यस्तै हुन् ।
रमेशले झापाको गह्रामुनीमा ५ कक्षा सम्म पढे । त्यसपछि उनी दृष्टि:विहिन विद्यार्थीह’रुले अध्य’यन गर्ने पुर्वाञ्चल ज्ञान चक्षु विद्यालयमा पढ्न थाले । दृष्टिविहिन मात्र अध्ययन गर्ने विद्यालय भए:काले उनलाई त्यहाँ पढ्न पनि सजिलो भयो । उनी सानै देखि नै गीत संगीतमा पनि रुची राख्थे ।
दृष्टिविहि’नहरुका लागि उपयुक्त हुने वि’भिन्न कृयाक’लाप गराउने भएकाले अन्य कृयाकलापमा पनि उनी सकृय थिए । उनले २०६९ सालमा एसए’लसी दिएर प्रथम श्रेणिमा पास गरे ।
दृष्टिविही:न भएकै कारणले गर्दा उनी बेला बेला अपहेल’ना पनि सहनु परेको पनि बताउँछन् । कतिपय अव:स्थामा घर परिवारबा:टै समेत अपहेलित भएको कुरा बताउँछ । रमेश भन्छन “मलाई घरमा कुनै नयाँ मानिस आए भने लुक्न लगाइ:न्थ्यो । तलाइ अरु कसैले देखे भने घरको इज्जत जान्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिइन्थ्यो ।”
अब प्रस्तुत छ १६ वर्षअघिको रमेश प्रसा’ईको एउटा डकुमे’न्ट्री भि”डियो ।
Prevअर्जुन बिक प’क्राउ परेपछि घरमा पहिलो पटक मिडिया ,भाइरल बनेर के पाए अर्जुनले ? -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
NextExluseive हेन्डसम इन्डियन आर्मी राहुल जस्लाई श्रीमतीले अन्तिम पटक फोनमा हाँसो गर्दै बेपत्ता भइन् ,छोरीले ममि खोज्छिन्.. भावुक हुँदै सुनाए त्यो कहानी (भिडियो सहित)
“कुरा बुझ्न पर्च” हिट भयपछी गायिका शमिक्षा अधिकारी पहिलो पल्ट मिडियामा , गीत गायर दिनको लाख कमाउछिन् (भिडियो सहित)
आज फेरी ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य ,आज तोलामा यति धेरै बढ्यो हेर्नुस्